सुनिल बराल/काठमाडौं, १५ मंसिर । सत्तारुढ नेकपाले भक्तपुरको प्रदेश १ (ख) मा पराजित हुनु परेको छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुष्णलाल भँडेल विजयी भएका छन् । त्यस्तै यसअघिको चुनावमा नेकपाले जित हात पारेका चितवन लगायतका अन्य स्थानमा समेत नेकपाका उम्मेदवार पराजित भएका छन् ।
उपनिर्वाचनमा पूर्व माओवादीका उम्मेदवार हारेपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि थपिने कतिपयले विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् ।
यसअघिको निर्वाचनमा भक्तपुर प्रदेश १ (ख) मा सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवारले जित हात पारेका थिए । उक्त क्षेत्रबाट नेकपाका दिवंगत उम्मेदवार हरिशरण लामिछाने १२ हजार ७ सय ८९ सहित विजयी भएका थिए । लामिछानेका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका जीवन खत्रीले ९९७७ मत ल्याएका थिए ।
तर लामिछानेको मृत्युपछि भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार देवीप्रसाद ढकाल पराजित हुन पुगेका छन् । ढकाललाई कांग्रेसका कृष्णलाल भँडेलले हराएका हुन् ।
अन्तिम मत परिणामअनुसार कांग्रेस उम्मेदवार भँडेलले १३ हजार ७ सय ४८ मत पाएका छन् भने उनका प्रतिष्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार देवीप्रसाद (डिपी ढकाल) ले ११ हजार २ सय १० मत ल्याएका छन् ।
चितवनले ‘कार्यकारी फिलिङ’ गरिरहेका प्रचण्डलाई दिएको सन्देश
भक्तपुरमा नेकपाका उम्मेदवार ढकाल किन हारे ?
तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भएपछि बनेको नेकपाले हाल दुईतिहाईको सरकार चलाइरहेको छ । ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय निकायमा नेकपाले एकछत्र सरकार चलाइरहेको छ ।
तर पछिल्लो समय भक्तपुर १ (ख)मा पूर्व एमाले र माओवादीबीच विवाद थियो ।
भक्तपुर प्रदेश १ (ख) मा ढकालले चुनाव हार्नु पछाडि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र किचलोले काम गरेको धेरैको बुझाइ छ । ढकाललाई उम्मेदवार बनाएपछि पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु उक्त निर्णयप्रति भित्रभित्रै रुष्ट बनेका थिए । पार्टीले स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत ढकाललाई उम्मेदवार बनाएले उनी हारेको पार्टीकै नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
अघिल्लो चुनावमा समेत उम्मेदवारलाई लिएर भक्तपुर प्रदेश १ (ख) मा विवाद देखिएको थियो । सुरुमा तत्कालीन माओवादीका देवी प्रसाद ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको थियो । तर चर्को विवादपछि अन्तत: लामिछाने नै नेकपाका उम्मेदवार बनेका थिए।
उपनिर्वाचनमा समेत उम्मेदवार छनौटबारे पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच विवाद देखिएको थियो । स्वर्गीय हरिशरण लामिछानेकी पत्नीसहित पूर्वएमालेका कैयौं नेताहरु उम्मेदवारको दौडमा थिए । नेकपाले ढकाललाई उम्मेदवार बनाएपछि अन्य नेताहरु रुष्ट बनेका हुन् ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भावनात्मक एकता नभएको संकेत
एकतापछि पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने भावना जिवितै छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा यो भावनाले अझै जरो गाडिरहेको छ । ‘पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी’ भन्ने भावना भक्तपुरमा झन सशक्त देखिन्छ ।
तत्कालीन माओवादीबाट ढकाललाई उम्मेदवार बनाउँदा तत्कालीन एमाले पक्षधरले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेको थियो ।
भक्तपुरका सांसद एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले समेत ढकाल हार्नुमा भावनात्मक एकताको अभाव रहेको स्वीकार्छन् । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच तलसम्म भावनात्मक एकता नदेखिएकाले मत परिणाम नेकपाको विपक्षमा देखिएको उनको बुझाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार ‘पार्टी एकता प्रक्रिया ढिलो भएको कारणले गर्दा तल्लो तहसम्म पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको एकताको प्रभाव दिन नसक्नु’ले भक्तपुरमा ढकाल हारेका हुन् ।
त्यस्तै सुरुदेखिनै उम्मेदवार ढकालविरुद्ध स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोख्दै आएकाले उनी हारेको बस्नेतले बताए । ‘उम्मेदवारका विरुद्ध पनि व्यक्तिगत खालका गुनासोहरू रहे, माओवादी पृष्ठभूमिजस्ता कुराहरू उठाइयो’, बस्नेतले भने, ‘कार्यकर्ता तहमा त्यो गुनासो साम्य पार्‍यौं तर जनताको तहमा रहेको त्यो भावना भत्काउन नसक्दा चुनावी परिणाम अनुकूल हुन नसकेको हो।’
चितवनले दिन खोजेको सन्देश
भक्तपुरमा मात्रै होइन, चितवनमा समेत नेकपाका उम्मेदवार अप्रत्यासित रुपमा पराजित हुन पुगेका छन् ।
उपनिर्वाचनमा भक्तपुर प्रदेश १ (ख) को चुनावी परिणामले मात्रै होइन, चितवनको परिणामले समेत नेकपाभित्र तलसम्म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भावना एकता हुन नसकेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।
उपनिर्वाचनमा प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा नेकपा उम्मेदवार हार्नुको एउटा कारण तलसम्म भावनात्मक एकता नहुनु पनि हो । चितवनको परिणामले नेकपाभित्र ‘पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी’ भन्ने भावना अझै पनि प्रवल रहेको देखाउँछ ।
उपनिर्वाचन अन्तर्गत चितवनका तीनवटा वडामा भएको निर्वाचनमा नेकपाका सबै उम्मेदवारहरुले पराजय भोगेका छन् । यसअघि एमाले एक्लैले जितेका वडामा समेत माओवादी र एमाले मिलेर बनेको पार्टी नेकपाका उम्मेदवारलाई कांग्रेसका उम्मेदवारले पराजित गरेका हुन् ।
पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं-४, वडा नं-५ र भरतपुर महानगरपालिका वडा नं-१६ मा वडाध्यक्ष पदमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।
प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका वडा नं-१६ मा कांग्रेसका उम्मेदवार अमृतराज हमालले जित हात पारेका हुन् । यसअघिको निर्वाचनमा उक्त वडामा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चतुरमान गुरुङ प्यानलसहित विजयी भएका थिए ।
प्रचण्डलाई दिन खोजेको सन्देश
चितवनको परिणामलाई लिएर पूर्वएमाले भित्र रहेको एक समूहले प्रचण्डको व्यापक आलोचना सुरु गरेको छ । तत्कालीन एमाले एक्लैले जितेको ठाउँमा माओवादी केन्द्र मिल्दासमेत पार्टी उम्मेदवार पराजय भएको भनेर जिल्लामा नेतृत्वको आलोचना सुरु भएको हो । यसले एकतापछि चितवनमा एकीकरणपछि नेकपा झन कमजोर देखिएको प्रस्ट हुन्छ ।
चितवन महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजय हासिल गरेकी प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालको चुनावी प्रसंग कुनै बेला चर्चित थियो । छोरीलाई चुनाव जिताउन प्रचण्डले साम, दाम, दण्ड र भेद सबै लगाएको तत्कालीन एमालेको आरोप थियो ।
शक्तिशाली सत्तासीनहरुसँग सबैतिर निरिह देखिएको प्रतिपक्षी भक्तपुर र चितवनमा किन अनपेक्षित ढंगले बलियो देखियो ? अन्य स्थानमा भन्दा प्रचण्डको आधारक्षेत्रमा किन कमजोर नतिजा आयो ? कतिपयले वामदेवको चुनावी पराजयसँग यस नतिजालाई तुलना गरेर हेर्न थालेका छन् ।
‘प्रचण्डलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुन नदिन पूर्व एमालेभित्र केही नेताहरु लागिरहेका छन्,’ पूर्वमाओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘वामदेवलाई बर्दियाबाट चुनाव हराएको घटनासँग यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।’
जित र हारको कारणहरु अन्य पनि छन् । तर चुनाव जित्न मतपत्र च्यात्ने र जस्तोसुकै हर्कत गर्ने प्रवृत्तिबाट चितवनका जनता वाक्कदिक्क भएर पो हो कि ? नेकपा र खासगरी प्रचण्ड समूहले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।